Netatmo Nnọọ, nyocha na uche | Gam akporosis
Alfonso nke mkpụrụ osisi | | Ngwaọrụ ndị ọzọ, Nyocha
O kwere omume dozie ụlọ anyị na-aghọ eziokwu dị nso kwa ụbọchị maka ndị nrụpụta dị ka Netatmo ndị na-enye anyị azịza zuru oke na ọnụahịa ezi uche dị na ya. Otu n’ime ha bụ Nweta Netatmo, igwefoto onyunyo nke nwere ike ime ka ndi mmadu mara na onye omekome.
Anyị enyeworị gị nke anyị mmetụta mbụ na mbipụta ikpeazụ nke IFA na Berlin, Ma ugbu a, ọ bụ oge iji nyochaa nyocha zuru oke nke ngwaahịa nke juru m anya nke ukwuu na ogo ya na ohere ya. Enweghị m oge ọzọ m ga-ahapụrụ gị ya Netatmo Nnabata onyunyo igwefoto nyocha.
1 Netatmo Welcome nwere ọdịdị mara mma na nke oge a
2 Wụnye Netatmo Nabata n'ụlọ, usoro mbụ
3 Netatmo Nnọọ, ndị a bụ nkọwa gị
3.1 Netatmo Nnabata na ime ụlọ na-enwu gbaa
3.2 Netatmo Nnabata na ọhụụ ọhụụ abalị na ọchịchịrị gbara ọchịchịrị
4 Kedu otu sistemụ ihu na-arụ ọrụ na Netatmo Nnabata
5 Ngwa zuru oke ma dị mfe iji
6 Tags, nke a bụ otú ọnụ ụzọ gị na ihe mmetụta windo si arụ ọrụ
9 Isi ihe na ihu ọma
10 Ihe megide
Netatmo Welcome nwere ọdịdị mara mma na nke oge a
Tupu ị na-ekwu maka imewe ahụ, kwuo na ngwugwu ahụ ụmụ okorobịa si Netatmo zitere m, igwefoto onyunyo vidiyo na mgbakwunye ihe mmetụta, Netatmo Tags nke na-arụ ọrụ dị ka mgbakwunye na Netatmo Nnọọ na nke ahụ na-achọpụta ma ọ bụrụ na windo ma ọ bụ ọnụ ụzọ emepe. A na-ere ngwugwu a iche iche, dịka m ga-aza ajụjụ ma emechaa.
Ka anyị jiri nke a malite Netatmo Nnabata igwefoto nnabata Maka, dị ka ị hụworo, eziokwu bụ na ọdịdị ya dị na ọla edo ọla edo adonized na-eme ka igwefoto dị egwu. Na ezigbo ego.
Mgbe ị na-ewere ya awade ezigbo aka na mmetụta nke anwụ ngwa ngwa, nke m nwekwara ike ikwenye n'enweghị obi abụọ ọ bụla: Anwalewo m igwefoto onyunyo otu ọnwa na m ga-ekwu na Netatmo Welcome bụ n'ezie iguzogide ọdịda; Enwere m nwamba na-egwuri egwu nke na-enwe mmasị ịnwale ngwaọrụ niile na-abata n'ụlọ na igwefoto a tụdaworo ugboro atọ ka ọ dị elu nke mita 1.5 n’enweghị nsogbu ọ bụla.
Na nha nke 15.5 cm elu na 4.5 cm na dayameta igwefoto dị obere iji tinye ya n'ebe ọ bụla n'ime ụlọ ahụ, ọbụlagodi na shelf, ebe ọ ga-adaba ngwa ngwa.
N'ihu bụ ebe ha chọtara oghere nke nwere nnukwu ọhụụ ọhụụ nke ogo 130, yana obere LED nke ga-enwupụta mgbe ejikọtara ya maka sekọnd ole na ole, na mgbakwunye na Infrared LEDs nke ga-ekwe ka Netatmo vidiyo onyunyo jiri ọbụna n'ọchịchịrị zuru oke.
Abụọ igwefoto dị elu na nke ala dị ọcha, ebe n'azụ anyị hụrụ ọdụ ụgbọ mmiri atọ: n'otu aka, a oghere micro SD, Micro USB port iji jikọọ Netatmo Welcome na n'ikpeazụ ọdụ ụgbọ Ethernet iji jikọọ ngwaọrụ na router.
Nke a bụ ebe m hụrụ naanị ma na ya imewe: eziokwu ahụ igwefoto chọrọ eriri ka ọ na-eri nri n'onwe ya na-agbaji ya na mma ya, na mgbakwunye na ịmachi ọnọdụ ya site na ịchọrọ ngbasa ozi dị nso, ma ọ bụ iji eriri ndọtị. N'ezie, a ghaghi icheta na, n'agbanyeghị njirimara teknụzụ zuru ezu, igwefoto Netatmo Welcome na-erughị euro 200 ka ọ bụrụ na ebe ha ga-akwụ ụgwọ.
N'ikpeazụ achọrọ m ịza ajụjụ na nkọwa: ngwaọrụ ahụ na-ekpo oke ọkụ mgbe o were ya ogologo ogeỌ gaghị agba aka gị ọkụ mana enwere m nchegbu na mbido na ọ nwere ike imebi. Na ntuziaka ha dọrọ aka na ntị banyere nke a wee kwuo na enweghị nnukwu nsogbu, mana achọrọ m ịjụ iji chọpụta ihe kpatara oke ọkụ a.
Belén Andrada, nke ụlọ ọrụ nkwukọrịta nke ụlọ ọrụ ahụ, kọwaara m na ọ bụ ihe zuru oke ebe ọ bụ na Netatmo Nnabata na-arụ ọrụ na algorithms dị mgbagwoju anya ma na-aga n'ihu na-eme ihe ọmụma, ya mere ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ka ọ kpoo ọkụ. Ka ịghara ịbawanye nhazi ya, Netatmo Nnabata enweghị mkpuchi ma ọ bụ mpụga mpụga, mana ihe anodized aluminom nke na-ekpuchi ya na-eme dị ka okpomoku ọkụ, yabụ na ị gaghị echegbu onwe gị banyere Netatmo Nnọọ oke oke ọkụ. N'ezie, ọ ka mma iji zere ìhè anyanwụ kpọmkwem iji hụ na ngwaọrụ ahụ arụ ọrụ kwesịrị ekwesị.
Wụnye Netatmo Nabata n'ụlọ, usoro mbụ
Igwefoto dị mma nke ukwuu na ihe niile, mana olee otu esi ejikọ ya? Nke a bụ ihe ọzọ na oke ịtụnanya m weere kemgbe ya Nkwụnye na Play usoro ọ dị mfe iji.
Just ga-eme wụnye ukara Netatmo Welcome ngwa na gam akporo gi ma soro uzo ozo o gha agwa gi ka i mee. Site na ngwa ị nwere ike nyochaa igwefoto na oge niile, na mgbakwunye na ịnweta ọkwa ma ọ bụrụ na onye omekome abanye n'ụlọ gị, yabụ ọ dị mkpa na igwefoto jikọtara na ịntanetị.
Mostzọ kachasị mma bụ site na gị Ethernet mmiri, kamakwa ị nwere ike jikọọ ya na gị na Wi-Fi network mfe na mfe. N'ọnọdụ m enwere m nsogbu ijikọ ya na rawụta m, agwalarị m gị na nsogbu ahụ dị na rawụta Ono m, mana ngwa ahụ nyere m ohere iji jikọọ Netatmo Nnọọ na netwọk Wi-Fi na aka site na itinye usoro nke ụdị dị ka rawụta IP address. O wereghị m nkeji ise iji hiwe ya. 2 n'ọfịs ebe m na-enweghị nsogbu na Wi-Fi.
Nke a bụ isi ihe m chọrọ igosipụta ọtụtụ ebe ọ bụ na m nwalere azịza ndị ọzọ iji dozie ụlọ gị na eziokwu bụ na ọ bụ ezigbo nsogbu iji mee ka ọ rụọ ọrụ. Na Netatmo Nnọọ, ihe dị mfe.
Netatmo Nnọọ, ndị a bụ nkọwa gị
Akụkụ 45 x 45 x 155 mm
Igwefoto 4 megapixel lens na-enye mkpebi 1920 x 1080 na ọhụụ abalị
Njikọ Wifi 802.11 b / g / n na Ethernet
Agba Nwa na ọla edo
Ahịa 187.76 euro na Amazon
N'akwụkwọ anyị nwere igwefoto zuru oke, mana olee otu Netatmo Welcome si arụ ọrụ n'ezie? M na-agwa gị na ihe ijuanya ahụ dị ukwuu. Na maka mma. Iji malite na igwefoto na-enye a mkpebi karịa ziri ezi, na-enye onyinyo dị nkọ na gburugburu ebe ọkụ dị.
Otu nkọwa m masịrị m bụ na igwefoto nwere Oge 130 ogo nlele ya mere, ọ zuru oke na-ekpuchi ụlọ zuru oke na-enweghị nsogbu na-enye gị ohere ịchọpụta ngwa ngwa ihu nke ndị mmadụ na-abanye na ịpụ n'ụlọ.
O juru m anya na oyiyi oyiyi na ọnọdụ abalị. Ugbu a, m ga-ahapụrụ gị foto ole na ole ka ị wee nwee ike ịtụle mana, na-eburu n'uche na e mere ule ahụ n'ime ụlọ mechiri emechi na ọchịchịrị zuru oke, ekwesịrị m ịsị na ogo Netatmo Nnabata na Ọhụhụ Ọhụhụ Night ezu.
Otu ihe di iche na Netatmo Welcome bu na o nwere a ọdịdị ihu usoro na oge na-aga ọ ga-amata ndị nọ n'ime usoro gị ma dọọ aka na ntị mgbe onye omekome batara. Ọfọn, na ọnọdụ ọhụụ abalị ọ na-aga n'ihu ịchọpụta ihu na-enweghị ọtụtụ nsogbu, nkọwa nke na-egosi nnukwu ọrụ nke onye nrụpụta ahụ mere.
Netatmo Nnabata na ime ụlọ na-enwu gbaa
Netatmo Nnabata na ọhụụ ọhụụ abalị na ọchịchịrị gbara ọchịchịrị
Kedu otu sistemụ ihu na-arụ ọrụ na Netatmo Nnabata
Ike nke Netatmo Welcome, na ihe kpatara ya kpochapụ CES na Las Vegas bụ usoro ihu gị na-achọpụta. Ọ bụkwa na igwefoto ga-adọ anyị aka ná ntị mgbe ọ bụla ọ hụrụ mmadụ n'ụlọ. Nnukwu ọdịiche dị n’etiti igwefoto onyunyo Netatmo ma e jiri ya tụnyere azịza nke ndị asọmpi ya bụ nke ahụ Netatmo Nnabata nwere ike ịkọwa ọdịiche dị na ha ma gwa gị onye batarala n'ụlọ gị site na ọkwa.
Maka nke a anyị ga-eji gị ngwa zuru ezu, dị na Google Play, nke ahụ na-arụ ọrụ nke ọma. Ozugbo anyị wụnye igwefoto, ka ọ na-ahụ ndị mmadụ na-agafe, ọ ga-echekwa okwu dị iche iche na-akpaghị aka wee jụọ anyị site na ngosipụta ndị ha bụ ka anyị nwee ike ịmepụta profaịlụ onye ọrụ dị iche iche.
A na-echekwa data a niile n'ụdị zoro ezo na sava ụlọ ọrụ ahụ. A ga-echekwa vidiyo na njide ewepụtara na ebe nchekwa Micro SD 8GB nke na-abịa na Netatmo Welcome. Anyị nwekwara ike ịchekwa ha na akaụntụ Dropbox anyị, n'agbanyeghị na achọrọ m ime ka usoro ahụ dum dị mfe dị ka o kwere mee, yabụ anọ m na-echekwa ozi niile na kaadị Micro SD. Na iche na ị nwere ike ịchekwa vidiyo 120, anyị nwere oke oke.
N'okwu m, anyị nọ mmadụ atọ n'ụlọ na usoro ejirila ụbọchị ise mata anyị. Ozugbo Netatmo Nnabata "bịanyere aka" aka, ekwesịrị m ịsị na igwefoto na-aghọta omume onye ọ bụla nke ọma, na-eme mkpakọrịta zuru oke. Eji m obi m niile na usoro a ga-arụ ọrụ ka njọ, enweghị m akụkụ anọ na ọ nwere ike ịmata ma chekwaa ihu n'ihu, mana Netatmo Welcome rubere na ndetu na nke a.
Na mgbakwunye Netatmo si ngosi usoro bụ configurable ya mere anyị nwere ike ịnweta ha zitere anyị ọkwa mgbe mmadụ batara n'ụlọ nke usoro ahụ anaghị amata, mgbe onye amaara ama batara na anyị nwere mmasị ịmara mgbe ha batara n'ụlọ na mgbe ha lara (ihe bara ezigbo uru ma ọ bụrụ na anyị nwere onye na-elekọta ụmụaka dịka ọmụmaatụ) na anyị nwere ike hazie igwefoto iji dọọ anyị aka ntị ma ọ bụrụ na mkpu ma ọ bụ igwe anwụrụ ọkụ apụ.
Nke a na-enye ohere bụrụ onye ị ga-ahọrọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịnata ọkwa ma ọ bụ obere dabere na mmasị nke ọ bụla.
Ngwa zuru oke ma dị mfe iji
Dị ka m kwuru, ukara Netatmo Welcome ngwa dị mfe ma dị irè. Iji nyochaa igwefoto anyị, anyị nwere ike ime ya site na ebe nrụọrụ weebụ na-emepụta ma ọ bụ iji ngwa ọrụ ya. Na mbido usoro ndị a, ahapụrụ m gị obere vidiyo ebe ị nwere ike ịhụ menu dị iche iche dị na ngwa ahụ.
Mee ka nke ahụ pụta ìhè N'ihe banyere ịchọpụta mmegharị, vidiyo ga-amalite ịchekwa obere sekọnd tupu mmegharị a emee.ma ọ bụ, na-agwụcha sekọnd ole na ole mgbe e mesịrị. Iji nye gị echiche, mgbe mmadụ batara ma ọ bụ hapụ ụlọ nke Netatmo Welcome na-enyocha, vidiyo ahụ na-adịru nkezi nke 30 sekọnd.
Ọzọkwa, ma na ngwa gam akporo ma site na weebụsaịtị Netatmo anyị nwere ike ịhụ na ezigbo oge ihe igwefoto na-edekọ gụgharia na-ege ntị na ụda. N'okwu a enwere obere oge ka igwefoto nwee ohere ịdekọ ma ọ bụrụ na mmadụ abanye na gburugburu ya, mana ọ bụ nkọwa na-adịghị enye nsogbu ma ọlị.
Tags, nke a bụ otú ọnụ ụzọ gị na ihe mmetụta windo si arụ ọrụ
Akụkụ ikpeazụ m chọrọ ikwu maka ya bụ Tags, obere ihe mmetụta nke a na-ere iche iche na mkpọ atọ na nke mejupụtara igwefoto Nnabata Netatmo. Mkpado ndị a nwere ihe ngagharị nke mere na, ozugbo awụnyere na ibo ụzọ na windo, anyị na-enweta ọkwa mgbe ha meghere.
Sensọ ahụ na-arụ ọrụ nke ọma, nke mere na ọ bụ ihe amamihe iji belata uche nke mere na ha anaghị arụ ọrụ site na ndudue n'ihi oke vibration Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na windo dị nso na-enweghị ihe mmetụta ahụ ka emechibidoro ma ọ bụ ụgbọ ala gafere nso.
Ngwunye nke na-adịghị mkpa mana nke ahụ na-agbakwunye ma na-abawanyewanye arụmọrụ nke igwefoto Nnabata Netatmo.
Mgbe m nwalechara ihe nrụpụta ọhụụ nke otu ọnwa, enwere m ike ikwu nke ahụ Igwefoto Nnabata Netatmo bụ usoro onyunyo zuru oke nke ahụ ga-enweta karịa atụmanya nke onye ọrụ ọ bụla.
Sọftụwia gị zuru oke, yana u- ngwa mkpanaka nke na-arụ ọrụ dịka amara na ọtụtụ nhọrọ, na ohere nke nyochaa ihe niile site na ibe weebụ, ya mere sistemụ arụmọrụ eji enweghị mmasị, ha na-enyekwu ngwaahịa bara uru nke juru m anya.
Achọrọ m ịkọwapụta nkọwapụta akara m: mmetụta nke nchekwa. Ọ dị ka nzuzu, mana ịnwe igwefoto onyunyo vidiyo n'ụlọ, inwe ike nyochaa ihe na-eme n'oge niile, na-ama ndị mmadụ na-abanye n'ụlọ m O meela ka m nwee udo nke uche ọzọ nke m na-atụghị anya inwe n'oge nyocha.
Tụle na Nnabata Netatmo ahụ Ọ dị na Amazon maka euro 187.76, O yiri m ka ihe karịrị ezi uche price na-atụle uru na ohere ndị a na-awa site a onyunyo igwefoto. Ọ bụrụ na nke a anyị tinye 95.35 nke Tags, anyị nwere zuru ezu onyunyo usoro maka ihe na-erughị 300 euro, a-akpali nnọọ mmasị price ka n'ụzọ zuru ezu ịbanye ụwa nke n'ụlọ akpaaka.
Adịchaghị imepụta na-emecha
Ngwa interface bụ nnọọ zuru ezu
Usoro ọhụụ nke abalị ya nwere àgwà karịrị ihe ijuanya
Ọ bụrụ na ọ chọghị eriri iji nye ya nri, ọ ga-ezu oke
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Nyocha » Netatmo Nnọọ, anyị na-enyocha onyunyo onyunyo nke na-amata ihu gị
Qualcomm na-ekwupụta ọkwa ọhụụ Snapdragon atọ: 653, 626 na 427
Ndị Simpsons na-eme emume nke 600th na-abịa Virtual Reality